မြိုလူမျိုး - ဝီကီပီးဒီးယား
၂ ဘာသာစကား နှင့် စာပေ
၄.၁ ရှေးအမျိုးသားတို့၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု
၄.၂ အမျိုးသမီးတို့၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု
၅ အိမ်ထောင် မင်္ဂလာပြုခြင်း
၅.၁ (က) ချွေးမရှာသွားခြင်း
၅.၂ (ခ) အဘုံရွှီ (Abun Xui)
၅.၃ (ဂ) မင်္ဂလာပွဲစာခြင်း
၅.၄ (ဃ) အဘုံလာ (Abun La)
၇ ရှေးရိုးရာအသုဘ အခမ်းအနားစီရင်ပုံ
၈ မြိုလူမျိုးတို့၏ ဆွေမျိုးနာမည်များ
၉ ရိုးရာဓလေ့ ပုံပြင်များ
၉.၁ ဖန်ဆင်းခြင်း ပုံပြင်
ဘာသာစကား နှင့် စာပေပြင်ဆင်
မြိုစာပေအား အဓိက တီထွင်ပေးသူ ဂျာမန် ဆရာမ ဟေလဂါ
၁၉၆၀- ခုနှစ်၊ ချင်းပြည်နယ် ဆမီးဒေသတွင် တွေ့ရသော မြိုအမျိုးသမီးပုံ
ဖိုင်:မြိုအမျိုးသား သမီး (ရခိုင်).jpg
၁၉၆၀- ခုနှစ်၊ ရခိုင်ဒေသရှိ တွေ့ရသော မြို အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား
(ခ) အဘုံရွှီ (Abun Xui)ပြင်ဆင်
(ဃ) အဘုံလာ (Abun La)ပြင်ဆင်
မြောက်ဦးခေတ်တွင် တွေ့ရသော ရှေးမြိုလူမျိုး ခေါင်ရည်သောက်နေသောပုံ။
ဖိုင်:မြိုလူမျိုးတို့ အသုဘ ချခြင်း မီးရှိုးခြင်း.jpg
မီးသင်္ဂြိုလ်ရန်ထင်းပုံစီနည်းမှာ အရှေ့နှင့်အနောက်ကိုအလျားပြုပြီး မိန်းမ ဖြစ်လျှင်ထင်းစီးခြောက်ထပ် ၊ ယောက်ျားဖြစ်လျှင်ယင်းစီးခုနှစ်ထပ်စီ၍ ပုံရသည်။ ထင်းပုံထက်သို့ အလောင်းကို တင်သောအခါတွင်လည်း ယောက်ျားဖြစ်လျှင်နေထွက် ကြည့်ဟန်ဦးခေါင်းကို အနောက်ဖက်တွင်ထားသည် ၊ မိန်းမဖြစ်လျှင် နေဝင်ကြည့်ဟန် ဦးခေါင်းကိုအရှေ့ဖက်သို့ ထားရသည် ။ နန်းတော် ဦးတိုက် ၊ နန်းတော်ကြည့်ဟူ၍လည်းခေါ်သည်။
↑ Pamela Gutman, “Burma’s Lost Kingdoms: Splendors of Arakan, p- 17
↑ Hughes, W. Gwynne, “The Hill Tracts Of Arakan,” P-12
↑ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ၊ တိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှု ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများ (ရခိုင်၊ စာပေဗိမာန်ပုံနှိပ်တိုက်၊ ၁၉၇၆)၊ စာ - ၃၁
↑ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၉) အပိုင်း (ခ)
↑ တွီဘင်၏ အနက် ကား ရေကြည် အစိုင်အခဲ့ ထွက်ရာ အရပ်ဖြစ်၏။
↑ ကုလားတန်မြစ်ဝှမ်းနေ ကနဦးတိုင်းရင်းသားများ၏ ဝင်ရောက်လာရာလမ်းကြောင်း ပဏာမလေ့လာချက်စာတမ်း (ရိုဆန်း)
↑ Pamela Gutman, “Burma’s Lost Kingdooms: Splendours of Arakan, p- 17
↑ တောင်ပေါ်အရပ်တွင်နေထိုင်သောကြောင့်တောင်မြို ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတော မြို့နယ်မှ မရူစားများကိုလည်း တောင်မြို ဟုခေါ်ဝေါ်လာသည်။
↑ Dr. E. Forchhammer, Report on the Antiquities of Arakan (Rangoon, Superintendent Government Printing, 1891), 54.
↑ မောင်ပုဆိုးကြမ်း၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အဘိဓာန်၊ (အလင်းသစ်စာပေတိုက် - ဒု၊ ၂၀၀၇)၊ စာ - ၉၉၊ ၁၄၃။
↑ “ဓမ္မဇေယျ စုံနှစ်မမူ၊ ထိုသူရဲမက်၊ သိမ်းခေါ်လျက်သာ၊ မြုံရွာအဝင်၊ တောင်ခွင်မြိုင်ခြေ၊ ရှောင်နေမလစ်၊ အားအံသစ်လျက်၊ ကစ္ဆပနဒီ၊ တပ်လုံးချီ၍၊ ကပ်မှီရောက်ခါ၊ မြောက် အညာသို့၊ သွားရာမလိုက်၊ တော်၌ပုံတူ၊ လူအပုံကို၊ အမြုံဟုခေါ်ဝါ၊ ချောင်းအမြွှာတွင်၊ သုံးရွာစုစု၊ နေမှတ်ပြုသည်၊ တည်ဘူးရာတွင်၊ ထိုပြင်မြေဝေး၊ ထွက်ပြေးလေတတ်၊ အမတ်နှင့်ပါ၊ များစွာသူပုန်း၊ နေတုံမလွဲ၊ အမည်စွဲ၍၊ ဟဲရုံခုတွင်၊ သို့စင်ပြည်ထဲ”
↑ ထွန်းရွေခိုင် ( မဟာဝိဇ္ဇာ)၊ ရခိုင်မင်းသမီးဧချင်း၊ (ယဉ်မျိုးစာပေ၊ ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၆)၊ စာ - ၅၂။
↑ မာယုလှိုင်(ကျောက်တော်)၊ တိုင်းရင်းနွယ်ဖွား မြိုလူမျိုး အမြတူ၊အမြကူနှင့်ပဲဖြူမင်းတို့ အုပ်ချုပ်စိုးစံတော်မူပုံအကြောင်း
↑ ထင်အောင် (ကျောက်တော်)၊ နိုင်ငံတော်မှပေးသော အခွင့်အရေးနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသား မြို ( ခမိ ) များရပ်တည်မှုစာတမ်း ( ၂၀၁၅၊ စာ-၇
↑ မောင်စာခေါင် ၊ မြို ဘာသာစကား၏ စကားသံများကို အသုံးချ သဒ္ဒဗေဒအမြင်နှင့် လေ့လာချက်၊ (ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်၊ ၁၉၉၀၊ စာ- ၄။
↑ Morgan, Census of Burma 1911, volume IX, Burma Part-I, Reports, - 256
↑ SIL, 2012
↑ Captain G. C. Rigby, “History Of Operations in Northern Arakan and the Yawdwin Chin Hills, (MIZORAM, 1896-97), P-175.
↑ ထင်းအောင် ( ကျောက်တော်)၊ ဘဝပုံရိပ်များ၊ ( Grace စာပေ၊ ၂၀၀၆)၊ စာ-၉၈။
↑ မောင်စာခေါင် ၊ မြို ဘာသာစကား၏ စကားသံများကို အသုံးချ သဒ္ဒဗေဒအမြင်နှင့် လေ့လာချက်၊ (ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်၊ ၁၉၉၀)၊ စာ - ၄၆။
↑ Luke Ahka, “The Anthropological Studies of Mrokhami People with Relevant Method for the Gospel: Cultural Anthropology For Christian Mission,” (Yangon, 2012), Page -2.
↑ ရခိုင် မင်းသမီး ဧချင်း အပိုဒ်(၁၉)တွင်ေဧး တုံမွေးမိ၊ နာထွေရှိလော၊ ဂေါလိယမင်း၊ သားရင်းသည်းချာ၊ ဒသရာလျှင်၊ မဟာမုနိ၊ ရှိရာအကြောင်း၊ ပေါင်းလောင်းမြို့ထီး၊ သင်းကြီးညွှန်ပြ၊ ပုညကြီးတွေ၊ လွန်ရိုသေလျက်၊ ဝင်လေသင်းတက်၊ ထွက်ခဲ့သင်တုတ်၊.......
↑ A. T. Houghton, Dense Jungle Green, 1937. 172-190.
↑ HC. Bizo, the Study of Mara Evangelical Church and her Mission: Education in Mission Fields (Thesis, MIT, Yangon, 2017), 124.
↑ စိန်သာအောင် ( ပလက်ဝ)၊ “မြို”တို့အကြောင်း ရှေးဖြစ်ဟောင်းဆောင်းပါးစုများ၊ ၂၀၁၅၊ (စာ- ၁၂၄)
↑ ထင်းအောင် ( ကျောက်တော်)၊ ဘဝပုံရိပ်များ၊ (Grace စာပေ၊ ၂၀၁၆)၊ စာ-၁၆၈-၁၇၃။
↑ Luke Ahka, “The Anthropological Studies of Mrokhami People with Relevant Method for the Gospel: Cultural Anthropology For Christian Mission,” (Yangon, 2012), Page -5
↑ Maurice Collis, “ Araken’s Place in the Civilization of the Bay: A Study of Coinage andForeign Relations”, Journal of the Burma Research Society, vol. XV, I, p 488, 1925. Quoted in Noel F. Singer, Vaishali and the Indianization of Araken( New Dehli, APH Publishing Corporation, 2008), p 90-91
↑ နာဘာ့ဘင် ၏အဓိပ္ပါယ်သည် တွဲလောင်း ချထားခြင်း ဖြစ်သည်။
↑ "The British Burma Gazetteer in two Volume, VOL II," Rangoon Printed At The Government Press, 1879, P- 425.
↑ ဦးလွန်ပု မြိုချင်းသည် မြိုဘာသာစကား၏ စကားသံများကို အသုံးချသဒ္ဒဗေဒအမြင်နှင့် လေ့လာချက် (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) မ ( ၁၉၈၂ - ၈၃ ) မဟာဝိဇ္ဇာ (မြန်မာစာ) ဘွဲအတွက် တင်သွင်းသောကျမ်း၊ မောင်စာခေါင် ( ၁၉၉၀) ၏ အဖိုးဖြစ်သည်။
↑ REPORT OF THE FRONTIER AREAS COMMITTEE OF ENQUIRY, 1947,(P. 95, 96)
↑ ၁၃ ရက် ၁ဝ လ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ ကြေးမုံသတင်းစာ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြိုလူမျိုး&oldid=560098" မှ ရယူရန်
၁၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၀:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၀:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။